मोफसल यात्रामा ‘सानो मन’ | suryakhabar.com
अब कसैले पनि सडकमा भेके र नाङ्गै देखिनु पर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
सामूहिक बलात्कार / दिउँसै गुण्डागर्दी गर्ने आठ जना प्रहरीद्वारा पक्राउ
Home मनोरञ्जन मोफसल यात्रामा ‘सानो मन’
on: June 29, 2019 In: मनोरञ्जनTags: No Comments
चितवन । चलचित्र ‘सानो मन’ युनिट यति बेला चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि मोफसल यात्रामा छ । २७ असारबाट मुलुकका सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रको युनिटले शुक्रबार चितवनका पत्रकारबीच अन्तक्रिया गर्दै २० असारमा भनिएको यो चलचित्र अब २७ असारमा मात्र आउने जानकारी गराएको छ ।
चलचित्रकी मुख्य नायिका शिल्पा मास्के ,कलाकार सक्षमकृष्ण सुवेदी र निर्माता राजेन्द्र मानन्धरले सानो मनको बारेमा प्रकाश पारे । शिल्पा मास्केले यस चलचित्रमा आफुले निकै मेहेनेत गरेको र चलचित्र दर्शकलाई मन पर्ने जिकिर गरिन् । पत्रकार भेटघाटमा नायिका शिल्पा मास्के आफु लण्डन बसेर बिदेशी फिल्ममा समेत काम गरेको अनुभब सुनाउदै नेपालमा नै केहि गर्छु भनेर नेपाल आएर नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेको जानकारी गराईन् । कथा बस्तु प्रभावशाली लागेर आफुले चलचित्र सानो मनमा काम गरेको र आफ्नो तर्फा बाट सकेको काम गरेको बताउदै अब दर्शक चलचित्र हेरेर मुल्यांकन गर्ने उनले बताईन् ।
यस्तै नब नायक सक्षम कृष्ण सुवेदी आफ्नो पहिलो चलचित्र भए पनि निकै मेहेनत गरेको र यस चलचित्र बाट ठुलो आशा लिएको छु भने । यता चलचित्रका निर्माता राजेन्द्र मानन्धरले चलचित्रको कथा नै मन परेर यस चलचित्र निर्माण गरेको बताए । चितवनमा पत्रकार भेटघाट सकिए लगतै चलचित्र युनिट पोखरा तिर लागेका छन् । सुयोग गुरुङको निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र ‘सानो मन’ युष्मान देशराज जोशी, शिल्पा मास्के, विशाल पहाडी, गौरी मल्ल, रश्मी भट्ट, शिशिर बाङ्देल, सक्षक कृष्ण सुवेदी, कृष्ण भक्त महर्जन, लक्ष्मी भुषाललगायतका कलाकारकोअभिनय रहेको छ ।
ओ.पि.जी फिल्मस, ए प्लस इन्टरटेन्मेन्ट र हाई टेक इन्टरटेन्मेन्टको संयुक्त ब्यानरमा सानो मन निर्माण भएको हो । सिनेमाको सम्पादन सुयोग गुरुङ र मिलन श्रेष्ठले मिलेर गरिरहेका छन् । यस सिनेमाका निर्माताहरू योगेश गुरुङ, राजीव श्रेष्ठ, रमेश के. मित्तल र राजेन्द्र मानन्धर हुन् । रित बोहरा मुख्य सहायक निर्देशक रहेको ‘सानो मन’ म्युजिकल लभस्टोरी जनरामा निर्माण भएको हो । सिनेमालाई आलोक शुक्लाले छायांकन गरेका हुन् ।
बारको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान, काँग्रेस समर्थकले प्यानलै जित्ने !
सभापति देउवाको निर्देशन: काँग्रेस नेतृत्व भएका स्थानीय तहमा जनताले कुनै दुःख नपाउन्
गाउँपालिकाको कार्यालयमा शङ्कास्पद वस्तु
दश हजार घुससहित एक जना पक्राउ